Gịnị mere ola-diamọn gburugburu nke otu nha siri dị ọnụ karịa nke diamond ndị a na-ahụkarị?
Ọtụtụ ndị enyi ga-ama na diamonds na-abịa n'ọdịdị dị iche iche. N'ihi na a na-ebipu diamon dị iche iche, ha ga-emepụta ụdị dị iche iche. Ihe a na - ahụkarị bụ okirikiri, a na - akpọkwa ihe ndị ọzọ dị ka diamonds pụrụ iche, dị ka mkpụrụedemede obi, nke nwere akara, maịlị, anya, oval, wdg. will ga-ahụ na ọtụtụ n’ime diamọnd dị n’ahịa ahụ ka gbara agba, na okwute ndị ọzọ nwere (obere ọmarịcha) diamonds na-aza maka obere nha. Dịka okwu a na-aga, ihe adịghị obere, kedu ihe kpatara ọtụtụ diamonds na diamond gburugburu otu ụdị nke dị oke ọnụ karịa ndị ọzọ?
Ihe kpatara gburugburu diamond dị oke ọnụ bụ n'ihi ihe ndị a: GM siri ike! Agba agba dị mma! Ihe efu!
Ahịa diamond gbara gburugburu dị mma, zuru ụwa ọnụ.
N'ihe banyere ọla-edo pụrụ iche (nke na-atọ ụtọ), diamond gbara gburugburu nwere ike ịnwale ule oge. Robe diamond abụghị naanị kpochapụwo, kamakwa ụdị dịgasị iche iche. Enwere ike ikwu na ọ bụ "ụwa"! Diamond ndị a na-egbutu dị mma maka ihe ịchọ mma nke ụdị dị iche iche. Ma, site na otu nọmba nke carat, bee n'ime diamond gburugburu ga-adị ka nke buru ibu, nke bụ ụdị nke diamond na-egosipụta nke ọma na agba ọkụ nke diamond. Ọha nwere nnabata kacha mma. Ya mere, ahịa dịkwa ukwuu.
Daịlị gbara gburugburu nwere ezigbo ihe ọdịdọ ma na-enwu enwu.
Ihe mere ndị mmadụ ji achọ diamond bụ maka na-egbu maramara. Nhazi ahụ nwere atụmanya iwepu ọkụ kachasị nke diamond site n'ihu. Ntughari a kwesiri idi otu iji mee ka diamond dum na-enwu. Mkpochapu okirikiri na-acha uhie uhie karịa ụzọ ndị ọzọ e si egbugbu.
Kwesịrị ka egbu ola diamond
Bee ola diamond
Ebipula oke oke oke oke
Brightdị nke na-egbukepụ egbukepụ bụ akụkụ ahụ nwere ọnụ na etiti okpokoro dị ka eriri. N’otu ọnọdụ ahụ, elu elu nke ọ bụla nwere akụkụ mbepu ya na otu ha na otu. Ezubere oke na akụkụ ndị a.
Maka ola diamond ndi ozo, n'ihi na ihe di nkpa zuru oke dika diamond gbara gburugburu ma o bu nke edoghi edo edo, o nweghi ike iweta mmetuta nke diamond gburugburu.
Enwere ike ikewa obere adịghị ike ndị ọzọ dị na usoro ndị a:
Ogologo dị iche iche: ọmụmaatụ, anya ma ọ bụ ola edo, ogologo akụkụ nke sara mbara ahụ ga-anyụ ka ọkụ karịa nke obere obere mkpụmkpụ n'etiti. Ya mere, akụkụ dị mkpụmkpụ nke ụdị diamond a ga-adị ka agba ọchịchịrị karịa ogologo, na-adị ka eriri ụta na-elekwasị anya na isi ala, nke a maara na ụlọ ọrụ dị ka mmetụta ụdọ ụta.
Dị dị iche iche: dịka ọmụmaatụ, ola-di nke a na -eme ka akpọrọ pear. N'ihi ọdịdị ahụ n'onwe ya, okirikiri na akụkụ dị ukwuu ga-agbachapụ karịa akụkụ dị obere ma dị nkọ, yabụ, ọ dị ka nhịahụ zuru oke nkesa nke diamond na-ezighi ezi, ọ bụghị dị ka nke zuru oke dị ka dayameta gburugburu.
odịdị pụrụ iche (okwute okike) diamond Obere mfu!
Ihe ọzọ dị mkpa mere ola diamond ji dị ọnụ karịa ka a na-akụ ihe ndị pụrụ iche bụ na diamonds gbara okirikiri nwere nnukwu mfu na mbelata ike. Na nkenke, ọ bụ mkpofu ego!
N'ihi na enwere ọtụtụ diamond gbaa gburugburu, oriri diamond dị elu. Mgbe etinyere diamond siri ike ma sie ike, ọnụego mfu dị ka 47%, naanị 53% na-ahapụ mgbe ịkpụchara diamond na-egbuke egbuke. Enwere ike idobe ịdị arọ carat nke ihe eji eme ihe pụrụ iche 55% -60% mgbe ịkpụchara ma gwechaa. Dabere na rashọ a, ị ga - amata ihe kpatara ola diamond ji dị oke ọnụ!
Diamdị diamond gburugburu (57 ma ọ bụ 58)
Peoplefọdụ ndị mmadụ nwere ike jụọ ma diamond gbara gburugburu ma ọ bụ nke nwere odo dị okirikiri dị mma? Site n'echiche nke itinye ego, diamond gbara gburugburu dị mma karịa ma guzogide ule nke oge; sitekwa na ụzọ ejiji, ola edo edo edobere anya dịịrị onwe onye.
N'ezie, diamond ndị nwere ọdịdị na-enwe ohere maka ekele, mana ikekwe ọ gaghị adị ngwa dịka dayameta ndị gbara gburugburu. E kwuwerị, otu ihe kwesịrị icheta bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ diamonds niile a ma ama n'ụwa bụ diamonds, ụfọdụ n'ime ha aghọwo akụ dị oke ọnụ ahịa. Ọtụtụ ndị na-eme ememme na-alụ di na nwunye nwere diamond pụrụ iche, ndị na-eme ndị eze na-eyi ha oge niile. Yabụ, ọ dị gị n'aka ịhọrọ nke gị. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya. Ọ ga - akachasị mma ma ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ.
Oge nzipu ozi: Apr-28-2020